9-kaan Qodob Haddii Lagaa Helo, Waxaad Tahay Ganacsade Cajiib ah! ‘‘entrepreneur’’ | Tuke Somalism - Tukesomalism.com
Siyaasadda Caalamka Marna Dhar Cad Marna Dhar Madow ITukesomalism.com
Cabdijabaar Sh. Axmed — March 30, 2019
Erayga ‘entrepreneur’ waa eray qalaad, sidaas awgeed madamaa aan doonaayo inaan eraygaan u bedelo Afsoomaali ahaan, waxaan u bedelayaa erayga ganacsadaha.
Taariikh ahaan erayga ‘entrepreneur’ markii ugu horeysay oo la soo bandhigay waxay ahayd sanadkii 1755-tii waxaana soo bandhigay qoraaga Cantillon. Waxa markii horre kalmadu ahayd ‘entreprendre’ oo macnaheedu yahay “awood wax lagu beddelo”
Erayga ganacsadaha ‘entrepreneur’ waxay leedahay macnayaal fara badan, marka dhinac laga fiiriiyo waa weer xanbaarsan macne qoto-dheer, asal ahaana ay qaataan dad tiro yar oo leh dabeecado gaar ah. Marka dhinaca kale laga fiiriyana qofka oo bilaaba shirkad cusub waxa loogu yeeri karaa ganacsade ‘entrepreneur.
Ganacsade waa shakhsi, halkii uu ka shaqeyn lahaa shaqaale ahaan, ka bilaabay ganacsi uu asiga maamulo isagoo*iyadoo ogaal u leh khatarta iyo hawlaha kaga imaan kara xagga maaliyada iyo dhaqaalaha iwm. Ganacsadaha waxaa caadi ahaan loo arkaa inuu yahay horumar, ilaha fikradaha cusub, badeecadaha, adeegyada iyo ganacsiga ama hababka. Ganacsatadu waxay door muhiim ah ka ciyaaraan dhaqaalaha dal walbo oo caalamka ka tirsan.
Qeexitaan Wikipedia wuxuu u qeexayaa sida tan,
“Entrepreneurship is the process of designing, launching and running a new business, which is often initially a small business. The people who create these businesses are called entrepreneurs.”
Afsoomaali: Ganacsadaha ‘antrabranoornarka’ waa hannaanka sameynta, dejinta iyo socodsiinta ganacsi cusub, oo inta badan markii hore ganacsi yaryar ahaa. Dadka abuura ganacsiyadan waxaa loogu yeeraa ganacsadaha.
Tilmaamaha ganacsadaha hal abuurka fiican leh waxaa lagu yaqanaa dabeecadaha soo socda, haddii aad leedahay tilmaamahaan soo socda waxaad tahay nasiib ee ka faa’idayso nasiibkaaga:
Waa qof u hamuuman in uu gaaro himilooyin sare: Gaarista himilo sare waa mid ay ku kala duwan yihiin ganacsadaha ‘antrabaranoorada. Halka qaar himiladoodu tahay in ay noqdaan bilyanneer, qaar kale waxa laga yaabaa in himiladoodu tahay in la aqoonsado.
Waa qof aan ahayn jar-iska-xoor oo dhabarka u rita khatar maxsuulkeedda la saadaalin karo ‘calculated risk: Inkastoo dadka bilaaba sharikaadka yaryar dhammaantood dhabarka u ritaan khatar haddana ganacsadaha waxay dhabarka u ritaan khatar siyaado ka ah kan mulkiile-maamulayaasha.
Waa qof hal abuur leh ‘Creative: Hal abuurnimada waxay noqon kartaa sida uu wax u qabto iyo waxa uu qabto labadaba.
Waa qof ikhtiraaca fikrado cusub ‘Innovative: Ikhtiraaca waxa lagu tilmaamaa tuulka kaliya ee ganacsadaha isticmaalaan si ay u abuuraan fursad ka duwan fursadaha kale oo dhan. Sidoo kale waa waxa ugu weyn ee ay kaga duwan yihiin mulkiile-maamulayaasha. Waxana arrintaas si aad ah u iftiimiyey Porter sanadka markuu ahaa 1990 buuggisa ku soo guuriyey in ‘ikhtiraaca iyo ganacsadaha yihiin wadnaha horumar ee wadan yeelan karo.
Mintzberg 1983 ikhtiraaca wuxuu ku qeexay ‘habka looga go’o nidaam gaamuray. Haddii si kale loo yiraahdo in wax loo sameeyo sidii loo samayn jiray si aan ahayn.
Porter 1998 ikhtiraaca waxa uu ku sifeeyey in uu yahay wax qunyar-qunyar loo sameeyo ‘Incremental.
Waa qof isu taagay siduu mustaqbalkiisa xor ugu noqon lahaa: Waa qof jecel innuu astaysto himilooyin qeexan iyo habkii uu ku gaari lahaa dabadeedna ku dhaqaaqo.
Waa qof dhibaatooyinka iyo buuqyada u dhabar adaygi kara: Ganacsadaha waa qof kalsooni buuxda ku qaba fikradahiisa. Kalsoonidaasi buuxda ee ay ku qabaan naftooda ayaana keenta in ay dadka kale ka gadaan ama ka dhaadhiciyaan fikraddaas. Waa dad hawlkar ah, shaqayn kara wax ka badan 18 saacadood maalintii.
Waa qof leh hiraal iyo karti dabiici ah ‘Vision and flair: Si ganacsatadu meel u gaaraan waa in ay leeyihiin hiraal la xayaabo tiray oo ku saabsan waxa ay rabaan in ay gaaraan. Hibada dabiiciga ah waxa lagu sharraxaa nasiibka in uu joogo ganacsadaha meesha saxda ah iyo waqtiga saxda ah.
Waa qof ka faa’idaysta fursadaha: Ganacsadaha waa qof fursad ka arka meel dadka kale aysan waxba ka arkin. Ganacsatada intooda badan dhib kuma aha in ay arkaan fursado fara badan ee waxa badanaa dhib ku ah in ay mid ama laba fursadood awoodda isugu geeyaan. Ganacsadaha qaarkood waxay si isdabajoog ah u curiyaan fikrado ganacsi dabadeedna way sii gadaan ‘serial entrepreneur.
Waa qof naftiisa kicin kara: Dabeecaddan oo takhaatiirta cilmi nafsigu ugu yeeraan dabeecadda ‘A’ ayaa mid khaas ku ah ganacsadaha. Inkastoo ay kiciyaan waxyaabo kale oo lacagta iyo magaca ama sumcadduba kamid yihiin, haddana, waxa ugu muhiimsan ii kiciya ayaa ah jamashada in ay meel sare gaaraan.
Dadka ku caan baxa dabeecadahaas ‘A’ waa kuwo aan yoolka isha ka qaadin, jecelna in ay shaqooyinkooda si dhaqso ah u fuliyaan. Waxaa kale oo dadkaasi awoodda saaraan mustaqbalka iyagoo ay dhici karto in aysan hawl maalmeedkooda hanan karin. Waxyaabaha kale oo dowr wayn ka ciyaara antrabranoornimada, cilmi baarisyaduna shaaca ka qaadeen waxa kamid ah aqoonta iyo khibrada.
Qofka ganacsadaha ah waxaa soo gaari karaayo saameyn weyn ee ku aadan ganacsigiisa haddii uusan aqqoon fiican u lahayn maamulida shirkada. Maamulida wanaagsan ama xoogan ma aha marwalba cad iyo madoow. Qofka laga yaabo inuu si xirfad leh u hoggaamiyo koox yar ayaa laga yaabaa in la soo dhejiyo awoodooda maaddaama dhufashada ay sii korodho iyo tirada warbixinnada tooska ah ay u koraan.
Khalid Halim, oo ah madaxa fulinta iyo aasaasaha shirkadda hoggaanka horumarinta Reboot, waxa uu sharxayaa waxa uu ugu yeeray “sharciga dhaqdhaqaaqa bilowga”: In kastoo “aadanuhu si qumman u korin, shirkaduhu kor ayey u kici karaan,” ayuu yidhi. “Xaqiiqada labajibbaaran ee aasaasida dhakhso ah: Haddii shirkadu kor u qaado sida ay tahay, waxay ka soo baxaysaa dad badan oo ka mid ah dadkeeda.”
“Horumarinta ama shaqaaleynta dadka si ay u noqdaan maamulayaal aan aheyn maamulayaal, waa wadada ugu dhakhsaha badan ee lagu jebin karo dhaqanka shirkadaada.”
“Shirkadaha waxay u baahan yihiin inay waqti qaataan si ay uga fikiraan waxa ka dhigaya maamulayaasha cajiibka ah ee shirkadooda gaar ahaan,” ayuu Metcalf yiri. “Waxaa jira qaar ka mid ah sifooyinka caalamiga ah iyo sifooyin gaar ah oo shirkad kasta ah.” Samee shuruudahaaga si cad, oo si joogta ah u isticmaal si aad u kireysato go’aanada iyo dib u eegista waxqabadka.
Markaad kor u qaaddo xirfada maareynta, waxaa si siman muhiim u ah in la abuuro fursado loogu talagalay maareeyayaasha si ay u korto magaca shirkada, masuuliyada, iyo faa’idada. Waxaa kaloo muhiim ah in la hubiyo in kooxuhu si fiican u qaabaysan yihiin sida inay jiraan wax isbedel ah. Dib-u-fiiri jadwalka ku-talagalka ah ee aad dejisay, ama jadwalka caadiga ah ee u shaqeeya shirkaddaada, oo ha ka waaban inaad sameyso isbedelka lagama maarmaanka ah.
Tixraaca qoraalada qaar:
Buugga Furaha Ganacsiga, – Saciid Cali Shire
Tags: Haddii Aad Isku Aragto 9-kaan QodobWaxaad Tahay Ganacsade ‘Antrabaranoor’ Cajiib ah!
Next post Dhiig-karka, Yaa Halis Ugu Jiro Innuu Kudhaco Dhiigkarka?
Previous post Rajo Iyo Himilo Sarraysa